Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata okpokoro dị ala China Low Scissor ebuli Isiokwu Factory
Nnukwu uru dị na tebụl ebili okpu profaịlụ dị ala bụ na ịdị elu nke akụrụngwa bụ naanị 85mm. Ọ bụrụ na ịnweghị onye na -ebuli elu, ị nwere ike iji ụgbọ ala pallet ozugbo ịdọrọ ngwongwo ma ọ bụ pallets na tebụl site na mkpọda, na -echekwa ọnụ ahịa forklift ma melite arụmọrụ ọrụ.
A na -ejikarị tebụl na -ebuli olulu mmiri na -eburu ngwongwo na gwongworo, mgbe ịwụnyechara ikpo okwu n'ime olulu. N'oge a, tebụl na ala dị n'otu ọkwa. Mgbe ebugara ngwongwo ahụ n'elu ikpo okwu, bulie ikpo okwu elu, mgbe ahụ anyị nwere ike ibuga ngwongwo n'ime gwongworo.
A na -ejikarị tebụl mkpị U ụdị ịwụnye na ijikwa pallets osisi na ọrụ njikwa ihe ndị ọzọ. Mpaghara ọrụ kachasị gụnyere ụlọ nkwakọba ihe, ọrụ ahịrị mgbakọ, na ọdụ ụgbọ mmiri. Ọ bụrụ na ọkọlọtọ ọkọlọtọ enweghị ike imezu ihe ị chọrọ, biko kpọtụrụ anyị iji gosi ma ọ nwere ike